नेपाल सहित यि ५ देशमा यस्तो चम* त्कार गर्दै चीन, के हो ‘दि फाइभ पार्टी’ ? (भिडियो हेर्नुहोस्) -
Home News नेपाल सहित यि ५ देशमा यस्तो चम* त्कार गर्दै चीन, के हो...
नेपाल सहित यि ५ देशमा यस्तो चम* त्कार गर्दै चीन, के हो ‘दि फाइभ पार्टी’ ? (भिडियो हेर्नुहोस्)
नेपाल सहित यि ५ देशमा यस्तो चम* त्कार गर्दै चीन, के हो ‘दि फाइभ पार्टी’ ?China The Five Party
प्याराग्लाइडिङ गर्ने भाइरल ‘हजुरबा’, चरा जसरी उड्ने सपना पूरा भएको दिन
काठमाडौँ- पर्टकीय नगरी पोखरामा जन्मिएका ऋषिराम गिरीले हरेक दिनजसो आकाशमा चराजसरी नाचिरहेका प्याराग्लाइडर्सहरु देख्छन्। आनन्द मान्छन्। उनको मन पनि रोमान्चित हुन्छ। तर अहँ, आफै भने अहिलेसम्म प्याराग्लाइडिङ गरेका छैनन्।
पैसा नभएर कि रहर नभएर ? ‘यो उमेरमा रहरै त किन नहुदो हो तर रहर मात्रले कहाँ हुन्छ र ! पैसा पनि चाहियो’, पोखरा महानगरपालिका-३३ भरतपोखरीका ऋषि भन्छन्। कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा सुपरभाइजर रहेका ऋषिकै आम्दानीमा उनी र दाजुसहित चार जनाको परिवार पालिँदै आएको छ। एसएलसीलगत्तै दाजुको स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि ६५ वर्षीया बुबा लक्ष्मणसहित परिवारको रेखदेख गर्नुपर्ने जिम्मेवारी उनकै छ। खेतिपाती गरेर सामान्य गुजारा गरिरहेको यो गिरी परिवारका लागि यतिबेला ऋषि बैशाखी बनिरहेका छन्।
‘घर परिवारको जिम्मेवारी काँधमा आएपछि व्यक्तिगत इच्छा आकांक्षा गौण हुने रैछन्’, २४ वर्षीय ऋषि भन्छन्। परिवारको खुसी नै आफ्नो खुसी लाग्छ उनलाई। बुढ्यौलीमा हिँडिरहेका बा-आमाका रहर पूरा गर्दा उनीहरुलाई हेरेर दंग पर्छन्। त्यसैले त बेला-बेलामा बालाई मोटरसाइकलमा चढाएर घुम्न निस्कन्छन्। दिनभर यताउता डुल्छन्। पोखराका डाँडाकाँडा पुग्छन्। भन्छन्, ‘ बुबा मोटरसाइकल चढ्न भनेपछि औधी रहर गर्नुहुन्छ। मलाई जतिबेला पनि फुर्सद नै कहाँ हुन्छ र ! तर जब हुन्छ, बुवालाई लिएर निस्किन्छु। बुवाको खुसीको सीमा हुँदैन।’
करिब डेढ वर्षअघि ऋषिले बालाई बाइकमा राखेर यसरी नै सराङकोट पुर्‍याएका थिए। प्याराग्लाइडर्सहरु आकाशमा उडिरहेका थिए। कोही खुला आकाशमा उड्ने तयारी गर्दै थिए। यो देखेर ऋषिको अनुहार हेर्दै लक्ष्मणले भने, ‘हामी चाहिँ यसरी उड्न पाइँदैन ? मर्नुभन्दा अगाडि यसरी एकपटक उड्न पाए हुने !’ ऋषि अचम्मित र के बोल्नु के बोल्नु भए। उनले देखेसम्म लक्ष्मणले साइकलसम्म कुदाएका छैनन्। उनलाई थाहा भएसम्म बाले हवाईजहाज पनि चढेका छैनन्। टाढाको यात्रा गर्नुपर्दा बस चढ्थे। मोटरसाइकलमा चढ्ने बानी पनि ऋषिले किनेपछि मात्र हुन थालेको हो। तीन वर्षअघि जागिर खान थालेपछि ऋषिले बाइक किनेका हुन्।
त्यस दिन ऋषिको खल्ती रित्तो थियो। तलब आउने समय पनि भएको थिएन। ऋषि चुपचाप बसे। बालाई सुनि मात्र रहे। केही जवाफ नदिई त्यहाँबाट निस्किएर घर आए। गएको कात्तिक १६ गते उनि घरमा बसेर मोबाइल खेलाइरहेका थिए। सामाजिक सञ्जालमा प्याराग्लाइडिङका रोचक तस्विरहरु छ्यापछ्याप्ती थिए, फेसबुकदेखि टिकटकसम्म। नजिकै आमा र बा बसिरहेका थिए। उत्साही हुँदै उनले ती दृश्यहरु आमालाई पनि देखाए। बा पनि उत्सुक हुँदै नजिकै आएर हेरे। बाको अनुहारको भाव बदलियो। उनले यो ठाउँ म पनि गएको थिएँ, कान्छाले लिएर गएको थियो भन्दै सुनाए। अनि केटाकेटी पारामा उनले श्रीमतीसँग ‘एकपटक धर्ती छाड्न पाए त हुने’ भने।
ऋषिले झल्याँस्स पुरानो घटना सम्झिए। यसपटक उनीसँग पैसा थियो। ५० प्रतिशत छुटमा प्याराग्लाइडिङ भइरहेको छ भन्ने उनले सुनेका थिए। ऋषिले उड्न सक्नु हुन्छ त भनेर सोध्दा बाले ‘किन नसक्नु’ जवाफ दिएर आतुर रहेको छनक देखाए। आमाले पनि लगिदे, लगिदे भन्नु भयो। केही नसोची प्याराग्लाडिङ गराउने कम्पनीको नम्बर खोजे अनि सम्पर्क गरे। भोलिपल्ट बिहानैका लागि टिकट मिल्यो।
‘तर जब टिकट काटेँ अनि डर लाग्न थाल्यो। यो उमेरमा प्याराग्लाइडिङ गर्दा समस्या होला कि भन्ने भयो। साँझसम्म प्याराग्लाइडिङ अपरेटरसँग कुरा गरिरहेँ। उहाँहरुले केही हुन्न, ७०/७५ वर्ष उमेरकाले पनि प्याराग्लाइडिङ गरेका छन् भनेपछि चिन्ता अलिक कम भयो’, उनले भने। यता बाको छटपटी आमाले देखिरहेकी थिइन्।
‘बा रातभर सुतेका छैनन्। चाँडै पुग्नु पर्छ भन्दै चार बजेदेखि नै तयार भएर बसेका छन्’, प्याराग्लाइडिङका लागि जानुअघि ऋषिलाई आमाले भनेकी थिइन्।
अपरेटरले ऋषिलाई प्याराग्लाइडिङ ल्यान्डिङ हुने ठाउँमा बस्नु भनेका थिए। तर उनको मनले मानेन। बालाई लिन आएको गाडीलाई पछ्याउँदै सराङकोट डाँडा पुगे। वरिपरि हेर्दा बालाई देखेनन्। शौचालय गएका रहेछन्। मामा उडेको हेर्न फुपूका छोराहरु पनि त्यहाँ आइपुगेका थिए। केहीबेरमा एक युवक नजिकै आएर ‘ल बा, तपाईलाई उडाउने पाइलट मै हो। अब जाम’ भनेपछि ऋषिको धुकधुकी अझ बढ्यो। फुपूका छोराहरुले बा उड्न लाग्दा सेल्फी भिडियो खिच्नुस् दाई मेमोरी हुन्छ भनेपछि ऋषिले गोजीबाट मोबाइल निकाले। बालाई फ्रेममा ल्याएर कुराकानी गर्न के खोज्दै थिए, चाउरी परेको अनुहार र दाँत फुस्किएका मुखबाट निस्किएको प्राकृतिक हाँसो छाड्दै लक्ष्मण विस्तारै आकाश माथिमाथि लागे।
‘सायद त्यतिबेला बुबाभन्दा पनि बढी खुसी म थिएँ। त्यस्तो खुसी कमै अनुभव गर्न पाइन्छ’, ऋषि सम्झन्छन्। अब लक्ष्मण कसरी ल्यान्डिङ गर्लान्, बुढो ज्यानलाई गाह्रो त नहोला नि भन्ने चिन्ता उनलाई थियो। उनीहरु खाजा खाएर निस्कँदा समय लाग्यो। सिधै अपरेटर अफिसमा जाने निधो गरे। तर जाँदाजाँदै अपरेटरको कार्यालय ठ्याक्कै ठम्याउन सकेनन्।
भने, ‘हामी कार्यालयभन्दा अगाडि बढिसकेका रहेछौँ। गुडिरहेको गाडीभित्रबाट बुबाले हात हल्लाइरहेको देखेँ। उहाँ मज्जाले हाँसिरहनु भएको थियो।’ गाडी राम्रोसँग नरोकिँदै लक्ष्मण हामफाल्दै छोराको नजिक पुगे। सायद उनी कति खुसी थिए, यही तरिकाले व्यक्त गर्न चाहन्थे कि! उनी कतिसम्म ‘एक्साइटेड’ भएछन् भने पाइलटलाई अझ माथिमाथिसम्म लैजान भनेछन्।
‘अब अर्को वर्ष पनि उड्नुपर्छ’, लक्ष्मणको उड्न रहर अझै सकिएको छैन। ऋषिका अनुसार त्यस दिन राति पनि अबेरसम्म आमासँग अनुभव सुनाएर बसेका थिए उनका बा।
यता ऋषिले बा उड्न लागेको बेला खिचेको सेल्फी भिडियो भने सामाजिक सञ्जालहरुमा भाइरल भएको छ। टिकटकमा मन पराइएको छ। ऋषि स्वयंको पनि तारिफ भएको छ।
अनि अब तपाईँ चाहिँ कहिले उड्ने ?
‘हेरौँ हामीसँग त अझै समय छ नि। मौका मिलेका बेला गरौँला’, ऋषिले हाँस्दै जवाफ दिए।
Previous articleयो कस्तो ब्रज* पात: मु’टु द’रो गरेर हेर्नुस – आमा र बैनीको अकालमै मृ’ त्युपछी भाईको यस्तो हा’ लत, रुदा रुदै (सके सहयोग गरौ कि सेयर गराै)
Next articleसंगै खा-टमा सु’तेको भेटे | ४ बर्ष देखि बाउको अर्कै आइ-माई संग लसपस थियो | आमा लाइ बाउले यस्तो गर्यो (भिडियो सहित हेर्नुहोस्)